Lahatsoratra nataon'i Danielle Ciappara ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Danielle Ciappara
Danielle Ciappara no mpandrindra ny haino aman-jery nomerika ao Hawthorne Direct, masoivoho dokambarotra mifototra amin'ny haitao miavaka amin'ny analytics sy ny fampielezan-kevitra amin'ny kaonty tompon'andraikitra mandritra ny 30 taona. Avy any San Francisco, Danielle dia gradin'ny kal sy USC. Nanoratra ny diany Masters momba ny fanovana anatiny sy ivelany amin'ny kolotsaina orinasa izy noho ny fiakaran'ny nomerika sy ny transmedia.
Alakamisy, Aprily 14, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Danielle Ciappara
Niova tanteraka ny fahazarana amin'ny fanjifana haino aman-jery tao anatin'izay dimy taona lasa izay, ary mivoatra ny fampielezan-kevitra amin'ny fanaovana doka mba hitazomana hatrany. Androany, ny doka doka dia zaraina manomboka amin'ny fantsona ivelan'ny Internet toa ny fahitalavitra, pirinty ary radio hatramin'ny fividianana doka nomerika sy fandaharana. Na izany aza, marika marobe no tsy mahazo antoka ny amin'ny fizotran'ireo fomba andrana sy tena izy ho an'ny tetikasan'izy ireo amin'ny dizitaly. Ny fahitalavitra dia antenaina fa mbola hampamoahana mihoatra ny iray ampahatelony (34.7%) amin'ny fanjifana haino aman-jery manerantany amin'ny taona 2017, na eo aza ny fotoana